चर्चित अभिनेत्री जुही ५० अौँ जन्मदिन मनाउँदै, उनकी छोरी जान्ह्वी एकसाथ - Everest Dainik - News from Nepal
चर्चित अभिनेत्री जुही ५० अौँ जन्मदिन मनाउँदै, उनकी छोरी जान्ह्वी एकसाथ
कार्तिक २७ । बलिउड क्षेत्रका चर्चित अभिनेत्री जुही चावला आज आफ्नो ५० औं जन्मदिन मनाउँदै छिन् । उनको जन्म १३ नोभेम्बर १९६७ को अंबाला (हरियाणा) मा भएको थियो । बताएअनुसार जुहीले १९९५ मा एक व्यवसायी जय मेहेतासँग बिहे गरेकी थिइन् । दुवैजनाको छोरी जान्ह्वी (२००१) र छोरा अर्जुन मेहता (२००३) ।
बताएअनुसार जुही आफ्नो बच्चाको लाइमलाइटबाट सधै टाढा राखेकी छिन् । उनको दुवैजना छोराछोरी कहिले पनि कुनै बलिउड पार्टी वा फिर इभेन्टहरुमा आउँदैन थिए । छोरी जाह्नवी लण्डनमा पढाई गर्दैछिन् । जुहीकी छोरी जान्ह्वी र छोरा अर्जुनले धीरुभाई अम्बानी इन्टरनेशनल स्कुलमा अध्ययन गरेका थिए । पछिको पढाई दुवैजना लण्डनमा नै गरिरहेको छ। उनको अभिभावक जुही र जय मेहेताले दुवैजना भर्ना युकेको बोर्डिङ्ग स्कूल चार्टर्ड हाउसमा गरेका थिए । यसै वर्ष अगस्तमा जुहीले आफ्नो छोरीको शेयर गरेकी थिईन् । जब जान्ह्वी स्कूलमा टपटेन विद्यार्थीहरुमा आफ्नो ठाउँ बनाइरहेकी थिइन् । उनले फोटोमा लेखेकी थिइन्– ‘Can’t believe my brilliant little girl ..!!!!🙏🙏🙏so proud of her’.
याे पनि पढ्नुस पाकिस्तानमा ‘जोली एलएलबी २’ रिलिजमा प्रतिबन्ध
अभिनेत्री जुहीले एक अन्तर्वार्तामा बताएकी थिइन् कि उनको छोराछोरीलाई फिल्मप्रति कुनै रुचि छैन । जान्ह्वी राइटर बन्न चाहन्थिन् । उनले बताएअनुसार उनकी छोरी लो प्रोफाइलमा रहन मन पराउँछिन् । यतिमात्र होइन कि, यो सामाजिक सञ्जालमा पनि एक्टिभ नरहेको बताएकी छिन् । उनले बताएकी थिइन् कि छोरी जान्ह्वी दीपिका पादुकोण र वरुण धवनकी फ्यान छिन् ।
याे पनि पढ्नुस सलमान खानको जीवनमा प्रवेश गर्ने १० युवती तथा अभिनेत्रीहरु यिनै हुन्